I-China i-1.3T, i-2.5T, i-5T, i-10T yentsimbi yokuGcina i-Magnet ye-Anchor Fixing abavelisi kunye nabathengisi | Meiko Magnetics
Ikhefu leSinyithi leMagnet yangaphambiliyenzelwe ngokufanelekileyo ukulungisa ii-ankile zokuphakamisa kumbumba osecaleni, endaweni yekhefu leerabha lendabuko. Ubume be-semi-sphere kunye nomngxunya osembindini wesiko wenza kube lula ukuphuma kwipaneli yekhonkrithi xa usonakalisa. Sigcwaliswe nge-1.3T, 2.5T, 5.0T, 7.5T okanye i-10T yohlobo lwe-anchor engafaniyo. Itywina lerabha elongeziweyo liyimfuneko ekusebenziseni ukubamba iankile ngokuqinileyo kumngxunya wangaphambili womazibuthe.
Ukuphakamisa iAnchor Capacity D d H Ukujija Nyanzela
mm mm mm IKG
Meiko Magnetics ibisoloko igcinwe ngokuqinileyo engqondweni ukuba "ukuveliswa kwezinto ezintsha, umgangatho kunye neemfuno zabathengi zingundoqo zeshishini". Siyathemba ukuba ubuchwephesha bethu kwindibano yamagnetic bunokukwazi ukufumana izimvo zakho ezingcono. Unokufumana zonke iimfuno zakho eziqhelekileyo okanye inkqubo yamagnetic eyenziwe apha ye-precast.
Egqithileyo INeodymium Irregular Magnet enoMdaka oMnyama we-Epxoy
Okulandelayo: I-350KG, i-900KG yeMagnethi yesonka yeeNqanawa zensimbi zePrecast okanye iPlywood Phuttering
2.5T Ukuphakamisa Anchor Magnet
5T Anchor Ukuphakamisa Magnet
Ukuncitshiswa kweMagnetic yangaphambili
Ikhefu leSinyithi leMagnet yangaphambili